Imageshack suck ! - MYSTERY ZILLION
Imageshack suck !
အခု​တ​လော imageshack က​ဘာ​ဖြစ်​တာ​လဲ​မ​သိ​ဘူး​ဗျာ။ အကုန်​ဖား​ပုံ​တွေ​ပဲ​ပေါ်​နေ​တယ်။ တခြား​သူ​တွေ​ဆီ​မှာ​ကော ဒီ​လို​ပဲ​လား​မ​သိ​ဘူး။ ကျွန်တော် ဘ​လော့​က post တော်တော်​များ​များ​ကို အဲ​ဒီ​က​ပုံ​တွေ​သုံး​ထား​တာ တေ​ပါ​ပြီ
တခြား reliable ဖြစ်​မယ့် image hosting လေး​ရှိ​ရင်​ပေး​ကြ​ပါ​ဦး
Yes, sometimes it's really SUCK. But, not all the time.
How about www.imagehosting.com ?
... အဲဒီဆိုဒ်လေးတွေကောင်းပါတယ် ... ပထမဆိုဒ်လေးကိုပိုသဘောကျပါတယ် ... :cool:
Register လုပ်ပြီး တင်ထားတဲ့ပုံတွေတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ။ ကျနောလည်း imageshack ဘဲသုံးနေပါတယ်။